Antontan-taratasy sy sonia hosoka no nampiasainy nentina nilazana fa azy ny tany. Tany iray natao antoka tamin`ny banky (hypothèque) tany Toliara no niantombohan`ilay resaka. Afa-trosa (levee) ny taona 1999 ka nahazo ny taratasy ara-dalàna ireo tompon-tany. Efa niakatra fitsarana io raharaha io ka resy ilay tompon’andraki-panjakana ambony noho izy tsy manana antontan-taratasy mazava. Nalefa ihany koa teny anivon`ny BIANCO ny raharaha satria feno hosoka sady anjakan`ny kolikoly ny taratasy rehetra nampiasaina : sonia hosoka, taratasy hosoka miaraka amin`ny firaisan-tsikombakomban`ny mpiasan`ny fananan-tany ao Toliara. Amin`izao fotoana izao na dia mbola mandeha eny anivon`ny fitsarana ny raharaha dia milaza ny an-kilany fa azy ny tany. Ho fantatra mialohan`ny 26 febroary izao ny momba izany na dia efa resy teny amin`ny fitsarana ambaratongo voalohany aza ilay tompon’andraiktra ambony. Efa mampiely feo sahady izy fa rehefa mivoaka ny didy dia handresy izy. Misy hatrany ny fanaovana ramatahora amin`ireo mpiambina ilay tany. Milaza tsy hanaiky izay didy hivoaka kosa ireo tena tompon'ny tany. Marihana fa efa tamin`ny taona 1956 no namidin`ny tompony io tany io fa ny volana jolay 2018 ity olona ity vao nilaza fa azy. Tsara ny manamarika fa ny vadin-tany any Toliara dia tsy nisy sahy niditra amin`ity raharaha ity noho ny fandrahonana nahazo azy ireo fa voatery naka vadin-tany avy aty Antananarivo.
Ao amin`ny fehezan-dalàna famaizana na “code penale » dia faux et usage de faux no ilazana ny fanaovana ny hosoka. Ny sazy ho an`ny halatra sonian`olona dia mety mampigadra enim-bolana hatramin`ny roa taona. Miankina amin`ny vesatry ny raharaha fa mampigadra hatramin`ny dimy taona mihitsy.